Kuo wuxuu leeyahay soosaarida MacBook Pro waxyar ayey bilaaban doontaa | Waxaan ka socdaa mac
Waxay u muuqataa in falanqeeyayaasha badankood ay wax isku raacsan yihiin, 14-ka cusub ee 16 XNUMX-inji ah ee loo yaqaan 'MacBook Pros' ayaa diyaar u noqon doona rubuckan ugu dambeeya sanadka. Sida laga soo xigtay falanqeeyaha caanka ah ee Apple Ming-Chi Kuo, Shirkadda Cupertino waxay lahaan laheyd wax walba oo diyaar u ah inay bilowdo soo saarida qalabkan cusub.
Dhowr saacadood ka hor waxaan si sax ah uga hadalnay suurtagalnimada ay Apple ka fiirsaneyso ka saar barta taabashada qalabka cusub, laakiin waxay u muuqataa in xilligan ay sidiisii ​​tahay. Ugu yaraan Kuo, ha ka hadlin saadaashiisii ​​ugu dambeysay.
Sidaa darteed waxay umuuqataa in bisha Sebtember wixii ka dambeeya aan heli doono qalab cusub oo diyaar u ah in la soo saaro tanina ma dhici doonto ka hor sababo la xiriira yaraanta qaybaha iyo aafada ku habsatay meeraha oo dhan. Sidan oo kale waxaan ku heli karnaa nafteena xaaladda shirkadda Cupertino ay soo bandhigto cusub 14-inch iyo 16-inch MacBook Pros dhawaan soo socda laakiin iyagu diyaar uma ahan inay iibsadaan dhowr bilood, sida ku dhacday iPad Pro ama ay hadda caajis ku tahay Beats Studio Buds, oo si rasmi ah loogu shaaciyey websaydh dhawr toddobaad ka hor laakiin aan loo heli karin iibsashadaada.
Noqo sida ay ahaan karto, waxay umuuqataa inaan heleyno qaar ka mid ah isbeddelada naqshadeynta ku saabsan barnaamijyadan 'MacBook Pros' sida uu ku soo weriyey Kuo laftiisa, dhawr toddobaad ka hor. Warbixinnada qaar waxay muujinayaan inaan dib u heleyno dekedda MacSafe iyo naqshad kale oo ka yar geesaha, laakiin kuwii ugu dambeeyay waxay ka hadlayaan luminta barta taabashada, waan arki doonaa waxa dhaca dhamaadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » Kuo wuxuu leeyahay soosaarida MacBook Pros waxyar ayey bilaabmi doontaa
Quful Apple Watch haddii aad ku maydhaneyso